Global Voices teny Malagasy » Sina: Tanora iray voadaroka mandra-pahafatiny noho ny fiankinan-doha amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Aogositra 2009 6:24 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Tamin'ny volana ambony, ny Ministera Sinoa momba ny Fahasalamana dia nilaza fa ny fampiasana herinaratra [electroshock treatment]  hitsaboana ny “fiankinan-doha amin'ny aterineto”  dia tokony hatsahatra. Na izany aza anefa, tsy nidika izany fa ny toeram-pitsaboana mitsabo ny “fiankinan-doha amin'ny aterineto” dia nampitsahatra ny fampiasana fampijaliana.
Vao haingana tamin'ny 03 Aogositra, zazalahy mpianatra iray vao 16 taona, mitondra ny solonanarana Deng, no nodarohana mandra-pahafatiny tao amina “akanin'ny tanora” iray tao Pangyu, Guangzhou. Araka ireo tati-baovao, i Deng dia nalefa sy nohidiana tao amin'ilay akanin'ny tanora ny tolakandron'ny 01 Aogositra . Tokony ho tamin'ny 3 tolakandro, nanambara ny fahafatesany ny tomponandraikitra ara-pahasalamana tao an-toerana. Mpanofana maro tao amin'ilay akanin'ny tanora no nosamborina sy nampangaina noho ny fidarohana nahafaty an'i Deng.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/08/21/3165/
 nilaza fa ny fampiasana : https://globalvoicesonline.org/2009/07/26/china-the-suspense-of-electroshock-for-net-addiction
 tati-baovao, i Deng dia nalefa sy nohidiana tao amin'ilay akanin'ny tanora ny tolakandron'ny 01 Aogositra: http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/32/1/1/1219923/1.html
 Lahatsoratra mifandraika amin'ty ao amin'ny GVA.: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/05/12/china-electric-torture-in-web-addict-clinics/